Rasmi: Race 3 iyo todobaadkiisa labaad ganacsiga uu sameeyay – Filimside.net
Rasmi: Race 3 iyo todobaadkiisa labaad ganacsiga uu sameeyay
Filimka Race 3 ayaa ganacsi hooseeyo sameeyay todobaadkiisa labaad wuxuuna keenay 24.75 Crore (Trade Figure) taasi oo ka dhigan in mudo labo todobaad uu soo xareeyay 164.75 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday.
Race 3 wuxuu sameeyay 82% hoos u dhac ah todobaadkiisa halka ay fiicnaan laheyd inuu 70% hoos u dhac sameeyo si uu 200 Crore u gaaro balse hadda cimri ahaantiisa halka uu gaarayo waxay ku xirnaan doontaa sida uu tiyaatarada ula qeebsado filimka Sanju oo maanta Hindiya oo dhan qabsaday.
Inkastoo Race 3 saxaafada ku tilmaantay inuu yahay filim aad u xun sheeko ahaan hadana todobaadkiisa labaad wuxuu ka ganacsi wanaagsan yahay filimkii Prem Ratan Dhan Payo oo keenay 24.75 Crore iyo Jai Ho oo 21.45 Crore keenayo todobaadkiisa labaad waana labo filim Salman sameeyay oo aad loo dhaliilay sheeko ahaan taasi waxay muujinee Race 3 xumaanta waalida ah laga faafiyay in ganacsigiisa siweyn u kala dhantaalin.
Fadlan hoos kaga bogo mudo labo todobaad Race 3 ganacsiga uu sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Todobaadka labaad – 24.75 Crore
Wadarta Guud – 164.72 Crore (Trade Figure)
Race 3 ganacsigiisa waxaa sare u qaaday todobaadkiisa labaad gobolada UP iyo Bihar oo uu 30% ganacsigiisa ku xeen daabnaa sida caadiga ah filimada labadaas gobol 15% ayay kasoo xareeyaan ganacsigooda marka loo eego.
Gobolada Mysore iyo Tamil Nadu / Kerala ayuu Race 3 aad ugu liitaa waana arin la filaayay waayo dadka halkaas ku nool Salman Khan filimadiisa haddii ay sheeko ahaan liitaan daacad uma noqdaan waxayna inta badan jecel yihiin daawashada filimada Shah Rukh Khan, Aamir Khan iyo Hrithik Roshan sida shabakada BOI in mudo ah u kuur galeesay ku ogaatay.
Gunaanad Race 3 waa filim guuleestay oo Average ah balse darajada Semi Hit inuu dalaci karo waxay kaga xirnaan doontaa todobaadkiisa sedexaad ganacsiga uu sameeyo.
Waxaa Aqrisay 900
Sxb shirkada boi waxan ku qoran race3 1week inu so xarey 144crore 2week 25crore sida guud wa 169crore wuxu hoos udhacy sida ku qoran 180
Sxb shabakad kale ayaad eegtay ayaan u maleynaa halka aan xogta saxda kasoo xigano waa http://www.boxofficeindia.com bal halkaas soo eeg si aan isku fahano waayo marar badan ayaad xogteena ku qanci weesay anaga shabakadaas kaliya ayaan xogta kasoo xiganaa meel kale waxba kama soo qaadano.